WOWOW Qubayska Qubayska ee Baahsan, 8 Inj Tall Musqusha Tabo Biyo-mareenka iyo Tuubooyinka - Tubooyinka Jikada ugu Fiican 2021 | Tubooyinka Musqusha ee ugu Fiican | WOWOW qasabadaha
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Qasabadaha Musqusha oo Fidsan / WOWOW Musqusha Baahsan ee Qubaysa Qasabadda Chrome, 8 Inch Tall Bathroom Tubada oo leh Dheecaan iyo Foosto
Laga soo bilaabo 4 illaa 16 inji tubbada musqusha oo baahsan oo ku dheggan 3-dalool, masaafadu waxay ku xiran tahay shuruudahaaga dhabta ah. Waxay ku habboon tahay guri kiro ah, kondho cusub, hal qol ah, guri mootada, isjiidka safarka iyo adeegsiga qoyska. Gacmaha toosan ee naqshadeynta ergonomics, cabbirka habboon ee ku habboon xakamaynta, raaxo leh in la leexiyo. Waxaad ku isticmaali kartaa dadaal yar iyo hab fudud.
QAABKA BASKA QALABKA PREMIUM--Jirka ugu weyn iyo isku xiraha qasabadda madow waxay ka samaysan yihiin naxaas adag, hawl culus oo waarta. Midabka u dhigma Soo-ururinta bullaacadaha iyo tuubbooyinka sahayda ee la oggolaaday ee CUPC ayaa lagu daray.
FARSAMADA XIRIIRKA XIRIIRKA EE ABUURKA- - Qaab u gaar ah “Y” oo si degdeg ah loogu dhisayo dhismaha tuubada way fududahay in la rakibo oo la keydiyo khidmadda tuubooyinka.
360 DEGREE SWIVEL WIDEDPREAD TUBE- - Gacan labalaab leh, 3 gogo 'oo naqshadeysan ayaa ku habboon xakamaynta heerkulka biyaha. 3-god oo leh 8-inji naqshad baahsan, masaafada ayaa lagu hagaajin karaa shuruudahaaga dhabta ah.
DHAMMAADKA KORMISKA BASHASHAY--Qasabad aan waxba tarayn oo ku jirta dhammaystirka chrome-ka muraayadda, naqshadaynta saqafka sare ee u gaarka ah si loo abuuro qaab-dhismeed aan duugoobayn.
DAMMAAN, TAAGEERADA Macaamiisha--Dammaanad 5 sano ah iyo taageero macmiil ayaa la bixiyaa. Waxaa daboolaya 90 maalmood oo soo noqosho ah. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto.
SKU: 2320500C Categories: Qasabadaha Musqusha oo Fidsan, Qubeyska Musqusha Tags: Chrome, Fidsan
Beteriyada waxaa ku jira?
Beteriyada loo baahan yahay?
Buurta Dusheeda oo baahsan
5-sano oo damaanad ah